Landa i-Fiat G.50 Freccia FS2004 - Rikoooo
I-Fiat G.50 Freccia FS2004
Usayizi 25 MB
Play 3 641
Umbhali: Jerry Beckwith Ignacio Alfredo Mendive Gabriel Mir
I-Fiat G.50 Freccia yizindiza zokulwa zeMpi Yezwe Yesibili. Okuhle kakhulu futhi kwenziwe kahle. Itholakala ngezindleko ezimbili. Faka phakathi imisindo eqondisiwe yokwenza okungaphezulu.
I-Fiat G.50 Freccia ("Umcibisholo") yayiyizindiza ze-World War II ye-fighter. Okokuqala kugeleza ngoFebhuwari 1937, i-G.50 yayiyisihlalo esisodwa sokuqala esisodwa se-Italy, sonke isixhumi se-metal ne-cockpit efihliwe kanye namagesi okugibela ukubuyela ekhaya. Abashayeli bezindiza babengathandi ukuqhutshwa komkhumbi we-cockpit, okwakungekho lula ukuvula ngokushesha nokuphazamisa umbono, ngakho-ke i-cockpit evulekile yamukelwa kamuva. Ekuqaleni kwe-1938, ama-Freccias asebenza eRegia Aeronautica, futhi ngengalo yayo yokuxhaswa, i-Aviazione Legionaria, eSpain, lapho ayezibonakalisa esheshayo futhi, njengoba kunjalo nezinkambiso eziningi zase-Italy, zikwazi ukwenza kahle. Kodwa-ke, yayinezikhali ezinganele (amabhomu amabili omshini we-Breda-SAFAT 12.7-mm). I-Fiat G.50 nayo isetshenziselwa izinombolo ezincane yi-Croatian Air Force ne-35 zagijimela eFinland, lapho zikhonza khona ngokuhlukana. (I-Wikipedia)